Site na Desk si MD | Inweta Odisha Njem & Njem
Ntughari! ... na Ekele si n'ala Onyenwe anyị Jagannath ...
Bhubaneswar - obodo nke ụlọ nsọ; isi obodo nke Odisha bụ ala m. Odisha, nke e ji mara omenala, ihe owuwu na ihe ndị dị oké ọnụ ahịa na-abụ mmụọ nke India. Ụlọ nsọ ndị dị ebube, akara ngosi akara ngosi, ogige ndị na-adọrọ adọrọ, ebe obibi anụ ọhịa na ogige ntụrụndụ, na anụ ọhịa ndị na-apụ apụ na chi Chilika na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa.
E gosipụtara m ọtụtụ ihe site na nwata m na nsogbu ndị nwere nsogbu. Nke a kpaliri m ịzụlite ụlọ ọrụ a ma nyochaa mmezu zuru oke nke nwere ike ịgba onye ezumike ma ọ bụ nzukọ nke ndị ọbịa ume n'ezie. Nke ahụ bụ ụzọ m si eji "Ụmụaka Nwanyị" Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd wee nweta ìhè.
Site na ahụmahụ m na itinye aka na ụlọ ọrụ a, enwere m ike ịnakọta otu ìgwè ndị ọrụ dị njikere nke ọma ma nwee ahụmahụ bụ ndị ga-agafe ọrụ ha karịa iji nye ndị nleta anyị ahụmahụ kachasị mma. Taa, anyị agbasawo nku anyị na New Delhi na Kolkata ma na-arụ ọrụ dị iche iche nke India site n'enyemaka nke Ngalaba Ntụrụndụ, Gọọmenti Odisha na Gọọmenti India.
M niile kacha mma gị niile na-atụ anya nabata gị Odisha